Wiil Yar oo Soomaali ah oo qabsaday Warbaahinta Caalamka kadib markii – idalenews.com
Wiil Yar oo Soomaali ah oo qabsaday Warbaahinta Caalamka kadib markii
Faah Faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Wiil yar oo dhawaan si aad ah u tabinayeen Warbixintiisa Warbaahinta Dunida kadib markii uu si layaab leh garoon amaankiisa aad loo adkeeyo kusoo galay kadibna isku qariyay taayarada Diyaarad garoonkaasi ka duushay,
Wiilkan layaabka dhigay oo 16 sano jir ah ayaa la sheegay in uu Soomaali yahay , waxa uuna maalintii Axaddii diyaarad ka soo duushey gobolka Kalafoorniya ee dalka Maraykanka isku qariyey shaaga diyaaradda halka uu galo, waxaana diyaaraddu ku jeedey gobolka Hawaii ,Waxaa wiilkan arkey shaqaalaha diyaaradda markii ay ku degtey garoonka diyaaradaha ee Maui.
Hay’adda FBI ayaa waraysi la yeelatey wiilkan dhalinyarada ah ee sida mucjisada ah ku badbaadey, FBI waxay sheegeen in wiilku shaaga diyaaradda ku soo dhuuntey kadib markii uu ka soo boodey gidaarka garoonka diyaaradaha ee San Jose.
Waxaaana uu awood u yeeshey Wiilkan yar duulimaad shan saacadood ah in uu ku jiro shaaga diyaaradda waxaana diyaaradu ku duushey joog ka badan 11 kun oo mitir, hawada sare ee diyaaraddu ku duuleysey, qabowga iyo cimilada uu ku soo duuley ayaa lagu qiyaasayaa in ka badan -50c.
Wiilkan yare e Soomaaliga ee isku qariyay Sheega ama taayarka Diyaarada ayaa la sheegay in uusan ogeyn halka ay diyaaradu kusii jeeday , hasa ahaatee Saraakiil Mareykan ah oo wareesi la yeeshay Wiilkan ayaa sheegay in qorshihiisu ahaa in uu Soomaaliya ku tago diyaaradaasi si uu usoo arko hooyadiis oo Soomaaliya kusugan.
Saraakiil Mareykan ah oo gacanta ku haya wiilkan Soomaaliga ayaa waxa ay sheegeen in uu xaalkiisa hada fiican yahay ujeedkiisuna ahaa kaliya in uu soo arko Hooyadiis uu mudo moogaa kuna sugan Gudaha Soomaaliya.
Jaaliyada Koonfur Galbeed ee North America oo Tacsi u diraya eheladii iyo qaraabadii ey ka geeryoodeen labada xildhibaan ee lagu diley magalada muqdisho.
Alshabaab: Hadafkeena koowaad waa xildhibaanada iyo maxkamadaha.